မှားယွင်းတတ်သည့် သဒ္ဒါနှင့် ဝေါဟာရအသုံးအနှုန်းများ ( Travel, Trip, Voyage or Journey, Look and Watch) - Myanmar Network
မှားယွင်းတတ်သည့် သဒ္ဒါနှင့် ဝေါဟာရအသုံးအနှုန်းများ ( Travel, Trip, Voyage or Journey, Look and Watch)
Posted by Myo Myint Kyaw on January 12, 2012 at 5:48 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
Travel, Trip, Voyage or Journey
Travel (v) ကို (Verb) အနေဖြင့် အသုံးများပါသည်။ Noun အနေဖြင့် အလွန်သုံးခဲသည်။
တစ်နေရာမှ တစ်နေရာသို့ ရွှေ့ပြောင်းသွားလာသည် ဟု အဓိပ္ပါယ်ရပါသည်။
ဥပမာ - I have to travelalot for work.
Trip (n) သည် ခရီး ဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည်။ ခရီးတို Trip သည် “holiday” အပျော်ခရီးထွက်ခြင်း အဓိပ္ပါယ်ရသည်။
ဥပမာ - How was your trip?
Business ကိစ္စနှင့်လည်း ဆက်စပ်အသုံးများသည်။
ဥပမာ- I have to travelalot for work. I am off on another business trip next week.
Trip (v) ကြိယာအနေနှင့် မူမတူကွဲပြားသော အဓိပ္ပါယ်ရှိသည်။ ခလုပ်တိုက်မှောက်လဲသည်ဟု အဓိပ္ပါယ် ရသည်။
ဥပမာ- I tripped over the carpet and sprained my ankle.
Voyage (n) ရေကြောင်းဖြင့် ခရီးဝေးသွားခြင်းဟု မူလအဓိပ္ပါယ်ရှိသည်။ noun ဖြစ်ပြီး Verb အနေဖြင့်မူ အလွန် သုံးခဲသည်။
ဥပမာ - The voyage to South Africa took over six weeks.
Journey (n) ကို British English တွင်အသုံးများပြီး American English တွင် သိပ်မသုံးပါ။ ခရီးစဉ်ဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည်။ Journey ကို Verb အနေဖြင့် သုံးခဲသည်။
ဥပမာ - The journey from Yangon to Naypyitaw takes5hours.
Look ကို Preposition at နှင့် တွဲ၍ သုံးသည်။ Look at တစ်စုံတစ်ခု၊ တစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုကြည့်ရှုသည်။ (စိတ်ဝင်စားသည်)။ ငြိမ်နေသောအရာဝတ္တူကိုကြည့်ခြင်းဖြင့်သည်။
Watch (V) ဘာဖြစ်မလဲဟု စိတ်ဝင်တစားကြည့်ခြင်း၊ ရွှေ့နေသော၊ ပြောင်းနေသောအရာကိုကြည့်ခြင်း။
Look at him. (သူရဲ့ ရုပ်ကိုကြည့်ခိုင်းခြင်းသာ)။
Watch him (သူရဲ့လှုပ်ရှားမှုကို သတိထားစောင့်ကြည့်ရန် သတိပေးခြင်း)
Permalink Reply by 1hd7elxsrauau on January 12, 2012 at 11:31
ကျနော့်အတွက်တော့ အတော်လေး စိတ်ဝင်စားတဲ့ အခန်းဖြစ်ပါတယ်။ ဆင်တူရိုးမှား အဓိပါယ်မျိုးတွေ ဖြစ်လို့ပါ။ နောက် ရှိပါသေးတယ်၊ say, tell, speak, talk, deliver, address စသဖြင့် ပြောခြင်းကို ဖော်ပြတာမျိုးတွေလည်း ရှိပါသေးတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Permalink Reply by Dr. Nang Thu Zar on January 12, 2012 at 17:41
ဟုတ်ပါတယ်say ,tell ,............... အကြောင်းလေး ကျေးဇူးပြုပြီး ပြောပြပေးပါ
Permalink Reply by Myo Myint Kyaw on January 12, 2012 at 18:56
Say / Said & Tell / Told & Speak and Talk
Said သည် Say ၏ Past simple and Past Participle ဖြစ်ပါတယ်.... Direct Speech တွင် သုံးနိုင်ပါတယ်.
ဥပမာ------ "I'm sorry" , said the criminal.
Indirect Speech တွင်လည်း that နှင့်လည်း ဆက်ပြီးသုံးပါတယ်...........
ဥပမာ------"The Criminal said that he was sorry".
ွှTold သည် tell ၏ Past simple နှင့် Past Participle ဖြစ်ပါတယ်....... အခြားသူပြောတဲ့အကြောင်းအရာကို Report Speech ဖြင့် ပြန်ပြောရာတွင် အသုံးပြုပါသည်။ အပြောခံ Object နှင့် that ဆက်၍လည်း သုံးနိုင်သည်။
ဥပမာ--------I told him that I would be late.
ညွှန်ကြားပြောဆိုသည့်နေရာတွင်သုံးပါက Object နှင့် infinitive နှင့် တွဲ၍ သုံးပါတယ်..........
ဥပမာ ------He told me to leave.
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ Speak နဲ့ Talk တို့ရဲ့ ကွာခြားချက်ကိုတော့ ဒီနေရာ မှာ သွားရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
Permalink Reply by aungkyaw on March 3, 2012 at 21:35
"say" it's mostly used in direct speech and "tell" it's mostly used in indirect speech. As an example, I said him to take of herself. (direct speech). Ma Ma told me Aung Aung is stupid. (indirect speech). I try the best of my ability to explain you. Thanks.
Permalink Reply by Kay Thwe Tun on January 12, 2012 at 12:56
Thank you so much for your explanation!!!
Permalink Reply by ZAR YEE MON on January 12, 2012 at 13:25
Permalink Reply by myintmyintkhaing on January 12, 2012 at 13:45
Permalink Reply by 25zwss2edzhdf on January 12, 2012 at 15:43
Permalink Reply by hninn pwint on January 13, 2012 at 14:57
Permalink Reply by khinekhine on January 13, 2012 at 16:40
Permalink Reply by Maung Maung One on January 15, 2012 at 12:01
Permalink Reply by tin zar on January 16, 2012 at 15:54